မြန်မာသံတော်ဆင့်: ဘာသာရေး လူမျိုးရေးပြဿနာ များဖြေရှင်းကြရာတွင် --
“People are unable to forgive what they cannot punish.”
- (a line fromatextbook on international human rights)
ထိုမျှနှင့်မပြီးဘဲပြည်နယ်မြို့ တော်စစ်တွေတွင်ပုလိပ်ပစ်သဖြင့်လူတွေ ဒဏ်ရာရထားသောသွေးသံရဲရဲပုံများအင်တာနက်တွင်တက်လာသည်။
မည်သည့်ခေတ်၊မည်သည့်အစိုးရလက်အောက်၌မဆိုလူ့ အဖွဲ့ အစည်းအတွင်း
လူအုပ်စုကြီးနှစ်ခုအဓိကရုဏ်း (communal strife) ဖြစ်လာလျှင် အုပ်ချုပ်ရေးသမားကဖြေရှင်းပေးသောနည်းသည်အောက်ပါလေးမျိုး
၁. နှစ်ဘက်စလုံးကျေနပ်တဲ့ဖြေရှင်းနည်း - ရှာမှရှား - မရှိသလောက်နီးပါး
၂. နှစ်ဘက်စလုံးမကျေမနပ်ဖြစ်ကျန်ရစ်တဲ့ဖြေရှင်းနည်း - အများဆုံး နှင့် အမြဲတမ်းနီးပါးဖြစ်
၃. ခံရတဲ့ဘက်ကကျေနပ်တဲ့ဖြေရှင်းနည်း - အဆုံးတွင်ခံရသူကိုယ်စားလက်စားချေပေးခြင်းဖြစ်သွားတတ်
၄. ပြုတဲ့သူဘက်ကကျေနပ်တဲ့ဖြေရှင်းနည်း - ကျူးလွန်သူသည်အုပ်စိုးသူအသိုင်းအ၀ိုင်းနှင့် ၀င်ဆံ့နေသောအခါ
ပို၍ကျယ်ပြန့် နက်ရှိုင်းသည်။ တအုံ့ နွေးနွေးဖြစ်နေသည်မှာကြာပြီ။
နာတတ်သည့် လူ့ သဘာဝကိုမည်သူမှတကယ်တမ်းမလွန်မြောက်နိုင်။
(Judicial aspect) အပြင်နိုင်ငံရေးရှုဒေါင့် (Political aspect) ကိုပါပေါင်းထည့်၍ကျေနပ်သည်အထိဆောင်ရွက်ရန်သာရှိသည်။
ရခိုင်လူထုကျေနပ်အောင်တစ်ခုခုကိုလျှင်လျှင်မြန်မြန်နှင့်ပြတ်ပြတ်သားသားလုပ်ပြသင့်သည်။ (အစိုးရသစ်ခေတ်တွင်ရခိုင်ပြည်နယ်သားများသည်ယခင်ကထက်ပို၍နိုင်ငံရေးနိုးကြားသည်။ မိမိတို့ ပြည်နယ်သည်ပြည်ထောင်စုအစိုးရထံမှယခုရနေသည့် အခွင့်အရေးများထက်ပို၍ ထိုက်တန်ကြောင်းကိုနည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ဖေါ်ပြနေကြသည်ကိုမြင်နေရသည်။)
မြန်မာနိုင်ငံတွင်သေဒဏ်သည်ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေ (Penal Code)
တွင်ပင်လက်တွေ့ ကျင့်သုံးနေသေးသည်ဖြစ်ရာလိုအပ်ပါကလက်မတွန့် သင့်။
မိန်းခလေးတစ်ဦးအားဝိုင်းဝန်း၍မုဒိမ်းကျင့် - ပစ္စည်းယူ - လူကိုသတ်ဖြတ်
(predation) ဖြစ်သည်။ လူမျိုးမရွေး - ဘာသာမရွေး - အရွယ်မရွေးမည်သူ ကျူးလွန်သည်ဖြစ်စေခွင့်လွှတ်ထောက်ထားညှာတာနေစရာအကြောင်းမရှိ။
“မျက်လုံးတစ်လုံးအတွက်မျက်လုံးတစ်လုံး - သွားတစ်ချောင်းအတွက်သွားတစ်ချောင်း”
(‘An eye for an eye’ is not justice in its entirety.
But it certainly is an element of justice.)
ရာဇ၀တ်ကြောင်းတရားရေး (Criminal justice) တွင်ကျူးလွန်ခံရသူ
နီမော်နှင့်တောင်ကုတ်တို့ ကလုပ်ရပ် ၂ခုစလုံးကိုရှုံ့ ချကြောင်းတရားဝင်အခမ်းနား များဖြင့်ကြေငြာသင့်ကြသည်။ ကျောက်နီမော်ကတရားခံများသည် မိမိတို့ ဘာသာဝင်ဖြစ်နေသည့်အတွက်အလွန်ရှက်မိကြကြောင်း -
သူတို့ ၏မိသားစုများကိုယ်စား၊ တရားလို၏ မိသားစု
ကိုယ်စားတောင်းပန်စကားဆိုသင့်သည်ဟုယူဆပါသည်။ ၀တ်ကြေ၀တ်ကုန်ကြေငြာချက်တွေထုတ်ကြဘို့ သာမဟုတ်။ ရွေးကောက်ပွဲ ကာလမဲဆွယ်ကြတုံးကလိုတကယ်ကွင်းဆင်းလုပ်ကြရန်လိုအပ်သည်။
ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ပြည်၊ မော်လမြိုင်၊ မုံရွာ၊ တောင်ကြီး၊ မြစ်ကြီးနား၊ မေမြို့စသည်မြို့ ကြီးတိုင်းတွင်အစ္စလန်ဘာသာဝင်တွေအများကြီး ရှိကြသည်။
World Economic Forum တွင်ပြောသွားသည်။
တဘက်တွင်လည်း ဘင်္ဂလားနယ်စပ်က “ရိုဟင်ဂျာ” ဆိုသူများကြောင့်ပြည်တွင်းက
မြန်မာမူဆလင်တွေဒုက္ခမဖြစ်သင့်။ သူတို့ သည်ပုဂံခေတ်ကတည်းက ရှိနေခဲ့ကြ၍လွပ်လပ်သောမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုလက်တွဲထူထောင်ခဲ့ကြသူတွေဖြစ်သည်။
(immigration question) သာဖြစ်သည်။ ဤပြဿနာမျိုးနိုင်ငံတိုင်းမှာရှိသည်။ အထူးအဆန်းမဟုတ်။
သို့ သော်လူဦးရေဖိအား (population pressure) အဆမတန်များနေသောနိုင်ငံ
ချိနဲ့ သောတိုင်းပြည် (weak state) ဖြစ်နေသောမြန်မာနိုင်ငံတွင်ပြဿနာပိုကြီးသည်။
အချိန်ကြာလာသည့်အခါလူဝင်မှု ပြဿနာ (illegal migration problem)
ကိုနိုင်ငံရေးပြဿနာ (political question) အဖြစ်ပြောင်းလဲဘို့ အားထုတ်လာသည်။
၁၉၄၉ တွင်တစ်ကြိမ်၊ ၁၉၇၈တွင်တစ်ကြိမ်အရေးယူရသည်။
သို့ သော်တိုင်းပြည်ကလည်းချိနဲ့- လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေး
နိုင်ငံတကာစံများ (internationally recognized norms) ကိုလည်း
အခွင့်ကောင်းကြီးကြုံကြိုက်လေတော့သည်။ လူ့ အခွင့်အရေးခေါင်းစဉ်နှင့်ကပ်၍
စာနာမှု (sympathy) ကို ရယူနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ စင်စစ်ရိုဟင်ဂျာဆိုသူတွေနှင့်မြန်မာ မူဆလင်တွေအကြားတွင်ဘာသာရေးမှလွဲ၍ကျန်အချက်အတော်များများကွဲပြားသည်။ ပုဂံခေတ်ကတည်းကယနေ့ မြန်မာပြည်ဖြစ်လာမည့်ဒေသတွင်ရောက်နေကြ သည့်မူဆလင်များသည်အခြားဒေသခံများနှင့်ယဉ်ကျေးမှုချင်းရောယှက်
(cultural assimilation) မှုအတော်ရင့်ကျက်နေပြီးသားဖြစ်သည်။
ဂီတ၊ ဗေဒင် ပညာမှအစတွင်လည်းမြန်မာများနှင့်တန်းတူထူးချွန်ကြသည်။
လွပ်လပ်ရေးမော်ကွန်းဝင်စသည့်တိုင်းပြု ပြည်ပြု ပုဂ္ဂိုလ်
စံနစ်ကြီးကြောင့်ပင်တိုင်းပြည်ချစ်စိတ် - ရှေ့ ကမျိုးဆက်များနှင့်စာလျှင်ပို၍နည်းသည်။ ဤသည်မှာအက်ဒ်မန်ဘာ့က်ပြောသလို “ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကိုချစ်စမ်းပါလို့ တိုက်တွန်းယင် - ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကိုယ်တိုင်ကလည်းချစ်ချင်စရာဖြစ်နေဖို့ လိုတယ်။”
(To make us love our country, our country ought to be lovely. Edmund Burke) ဆိုသည့်အတိုင်းဖြစ်နေရာသူတို့ ကိုတဘက်သတ်အပြစ်တင်၍လည်းမဖြစ်နိုင်ချေ။
သည်သူတို့ ကိုယ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံသားဟူသည့် identity ထက် မိမိတို့ ကိုးကွယ်ရာဘာသာ
(ခရစ်ယန်၊ အစ္စလမ်) ဖြင့်အများအားဖြင့် identified လုပ်ကြသည်။
ရှစ်ဆယ့်ရှစ်မျိုးဆက် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သူ(မြန်မာမူဆလင်)ကိုမြအေး၏ သမီးသည်အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၌မြန်မာစစ်အစိုးရဆန့် ကျင်ရေးဆန္ဒပြရာတွင်အစ္စလမ်
ထုံးစံခေါင်းစည်း (Hijab) ၀တ်ဆင်ကာမြန်မာနိုင်ငံတော်အလံကိုမြေတွင်
ချ၍ခြေဖြင့်နင်းထားကာဆန္ဒပြခဲ့သည်။ သူမသည် U.K တွင် “ရိုဟင်ဂျာ” အရေးကိုစွမ်းစွမ်းတမန်ရှေ့ တန်းကလုပ်နေသူဖြစ်သည်။
ယခင်အပါတ်ကအဖြစ်အပျက်သည်ရခိုင်ပြည်နယ်နေ “ရိုဟင်ဂျာ” အချို့ ၏ ရမ်းကားမှုဒဏ်ကိုပြည်တွင်းမူဆလင်တွေကအစားဝင်ခံရခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့ ကြောင့်ပြည်တွင်းနေမြန်မာ မူဆလင်(အဖွဲ့ အစည်း)များသည်မိမိတို့ နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်နေရိုဟင်ဂျာဆိုသူများဘာမှမပါတ်သက်ကြောင်း၊ သူတို့ ၏
ကိုမြအေးတစ်ဦးတည်း - ပြဿနာဖြစ်လာပြီးမှ - သူ့ ရပ်တည်ချက်
(administrative measures) ဖြင့် ဖြေရှင်း၍မရလျှင် ယခင်အစိုးရဟောင်း
ဘာသာရေးဝန်ထမ်းတွေပါလာလျှင်ပို၍ကောင်းဘို့ထက်ပိုဆိုးဘို့ ကသာ၍များပါသည်။]
Posted by Myint Shwe at 8:10 PM
Anonymous June 7, 2012 at 8:58 AM
Good article, I am Myanmar Muslim ,
Thank for your straight mind.
Unknown June 13, 2012 at 12:07 AM
i m Buddhist
Anonymous July 14, 2012 at 2:03 AM
အလှည့်ကျ မနွဲ့ စတမ်း
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွက် Border Guard Forces ဖွဲ့ စည...